July 11, 2019 - ThutaSone
သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို ့Wisdom Hill ကျောင်းအုပ်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူဒေါ်သီရီမေရဲ့တရားဝင် ဖြေရှင်းချက်
July 11, 2019 ThutaSone 0
Wisdom Hill ကျောင်းအုပ်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူဒေါ်သီရီမေရဲ့တရားဝင် ဖြေရှင်းချက် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Wisdom Hill ကနေပြီးတော့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင် သတင်းမှန်တွေ ဆိုပြီး လူမှုစာမျက်နှာတွေမှာ ရေးသားမှုတွေ ပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ Wisdom Hill […]
ဆရာ့စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားတယ်ဗျသချင်္ုိင်းကုန်းထဲမှာ ထမင်းစားခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာ (ဖြစ်ရပ်မှန်)
သချင်္ုိင်းကုန်းထဲမှာ ထမင်းစားခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာ (ဖြစ်ရပ်မှန်) ကျွန်တော် တောကျောင်းကနေ မြို့ကျောင်းကို ပြောင်းလာပေမယ့် မြို့ပေါ်ကျောင်းမှာ နေရတာ မဟုတ်ဘူး။ မြို့နဲ့ မနီးမဝေး မူလတန်းကျောင်းလေးကို ရောက်လာတယ်။ လေးတန်းအတန်းပိုင် တာဝန်ယူရတယ်။ ကျောင်းက ယိုင်တိုင်တိုင် စုတ်ချာချာ။ မိုးရွာ လေတိုက်ရင် မိုးလွတ်တဲ့နေရာ ခိုနေကြရတယ်။ ကျွန်တော့်လေးတန်းမှာ […]
ရန်ကုန်တွင် အာရှဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းချုပ်ရုံးဖွင့်လှစ် နိုင်ငံပေါင်း ၁၂ နိုင်ငံပါဝင်သောအာရှဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းချုပ်ရုံးဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ်နှင့် နယ်စပ်တောင်တန်းဒေသသာသနာနုဂ္ဂဟအသင်း(ဗဟို)ကဦးဆောင်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရမ်းကုန်းမြို့နယ်တံတားလေးလမ်းဝဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်၌ ယနေ့ နံနက်က ကျင်းပခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ထေရဝါဒငါးနိုင်ငံတွင်ဦးဆောင်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းကမ္ဘာ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွင်မူနောက်ကျကျန်လျက်ရှိနေသေးသည့်အတွက်ယင်းကိုမြှင့်တင်သည့်အနေဖြင့်အာရှတိုက်အတွင်းရှိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်ပူးပေါင်းကာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကူညီယိုင်းပင်းနိုင်ရေး၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူသားအားလုံး၏လူမှုဘဝသာယာကာတစ်သွေးတည်းတစ်သားတည်းရပ်တည်နိုင်ရေးတို့ကို ရည်ရွယ်ရှေးရုှ၍လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချူလာယောင်ကွန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်အမှူးပြုသောသင်ကြားစီမံဆရာတော်များနှင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတအဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဏိတဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တကုမာရ၊ဒုတိယကျိုက်ထီးဆောင်းဆရာတော်အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကတဇဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တနာဂဒီပအမှူးပြုသောသံဃာတော်များ၊သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူဦးအောင်ကိုနှင့်တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ၊မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ်နှင့်နယ်စပ်တောင်တန်းဒေသသာသနာနုဂ္ဂဟအသင်း(ဗဟို)ဥက္ကဌဝဏ္ဏကျော်ထင်ဒေါက်တာဦးခင်ရွှေနှင့်အသင်းဗဟိုကော်မတီဝင်များ၊ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအို၊သီရိလင်္ကာ၊အန္ဒိယ၊စင်္ကာပူ၊ဗီယက်နမ်၊တရုတ်၊ကိုရီးယား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံများမှဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်ပရိတ်သတ်များရာနှင့်ချီ၍ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ Credit: Pyi Myanmar
ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သမ္မတကြီးပွဲကြမ်းပြီ!!!!
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သမ္မတကြီးပွဲကြမ်းပြီ!!!! Wisdom Hill ကျောင်းကိုပါ အစိုးရက အရေးယူမယ်။ မူကြို ပြန်ဖွင့်ခွင့်ရဖို့ မလွယ်တော့ဘူး၊ သူပိုင်တဲ့ တခြား မူ၊ လယ်၊ ထက် ကျောင်းတွေကိုလည်း ပြန်စိစစ်ဖို့ သမ္မတက ပညာရေး ဝန်ကြီးကို ညွှန်ကြားလိုက်ပြီ။ ကလေးအမှု ဖြစ်စဉ်ကြောင့် […]
အမှုနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဒဲ့တွေပြောလိုက်တဲ့ နမ့်စန်မြို့က ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး
အမှုနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဒဲ့တွေပြောလိုက်တဲ့ နမ့်စန်မြို့က ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာယခုလက်ရှိအချိန်တွင် တရားခံအောင်ကြီးအား တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲကာတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသို့ တရားစွဲ ဆို ထားမှု အ ပေါ် နမ့်စန်မြို့ ကကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦး ကောင်းမြတ်သူက ယနေ့ မှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ် “မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ […]
ဒွေးကွယ်လွန်သွားတာ (၁၂)နှစ် တိတိပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲ ယနေ့တိုင် ရှင်သန်နေတဲ့ ဒွေး
ဒွေးကွယ်လွန်သွားတာ (၁၂)နှစ် တိတိပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲ ယနေ့တိုင် ရှင်သန်နေတဲ့ ဒွေး ပရိသတ်ကြီးရေ.. ကိုသားကြီးလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အနုပညာလောကမှထိပ်တန်းကနေ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲ အခိုင်အမာနေရာယူထားတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အနုပညာရှင်ကတော့ ပြည်သူပရိသတ်တွေအားလုံး ယနေ့တိုင် မမေ့နိုင်သေးတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသာ ဒွေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ဒီကနေ့လေးကတော့ […]
အကျိုးပြုစေမယ့် တံတားကို ပင်စင်လစာတွေနဲ့ဆောက်ပေးခဲ့သူ
အကျိုးပြုစေမယ့် တံတားကို ပင်စင်လစာတွေနဲ့ဆောက်ပေးခဲ့သူ ကမ္ဘာပေါ်ကနေရာတိုင်းဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးလည်း ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်နေဖို့ဆိုတာ အခုအချိန်အထိတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ မမျှတဘူးပဲပြောပြော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ ဒေသတွေဟာဆိုရင်လည်း လူနေမှုကအစ အရမ်းမြင့်မားနေသလို မပြည့်စုံတဲ့ဒေသတွေကျပြန်တော့လည်း တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာကို သွားဖို့လာဖို့တောင် အနိုင်နိုင်ရယ်ပါ။ အစိုးရဖက်ကလည်း တတ်နိုင်သလောက် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးချာမွေ့အောင် လမ်းတွေပြုပြင်၊ တံတားတွေတည်ဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် မပြီးမစီးနိုင်တာတွေ၊ လုပ်ငန်းမစနိုင်သေးတာတွေဖြစ်လို့နေပါတယ်။ […]
သတ္တိရှိရှိရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ
ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတ္တိရှိရှိ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ ယမန်နေ့ ညက ရဲဇာနည် Page ကနေ ဦးသက္ကမိုးညို နဲ့ မပိုးဖြူတို့ကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းဖုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်း ထုတ်ပြန် ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူမှု ကွန်ရက် […]
တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးစေတနာပေါ့ အဖွားရယ်အကြွေးနဲ့ထီရောင်းပေးတဲ့ထီသည်ကြီးကို ကားတစ်စီးပြန်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ အဘွားဒေါ်ခင်တင်
တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးစေတနာပေါ့ အဖွားရယ်အကြွေးနဲ့ထီရောင်းပေးတဲ့ထီသည်ကြီးကို ကားတစ်စီးပြန်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ အဘွားဒေါ်ခင်တင် 11.7.2019တဦး​မေတ္တာနဲ့တဦး​စေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင်အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှရွှေထီးထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအားကားတစီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်​။ Source:U Aye Minn Facebook Comments
မြန်မာပိုင် MyanmarSat2ဂြိုဟ်တု ပစ်လွှတ်အခြေစိုက်စခန်းသို့ ရောက်ရှိ
၂၄ ရက်တွင် လွှတ်တင်မည့် MyanmarSat2ဂြိုဟ်တု ပစ်လွှတ်အခြေစိုက်စခန်းသို့ ရောက်ရှိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ပါလိုအော်တိုမြို့တွင် (Palo Alto) မြို့တွင် တည်ရှိသော မာဇာနည်းပညာ (Maxar Technologies) ထုတ်လုပ်မှုအဆောက်အဦ၌ အပြီးသတ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် တောင်အမေရိကတိုက်၊ မြောက်အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာ ကမ်းခြေ၊ ကော်ရိုး၊ […]